Horumarka Gancsiga iyo doorka ajinabiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dadyoowga soogaloodigaa oo kaga faa'iidaystay sidii ay u horumarin lahaa ganacsigooda iyo waliba ka gungaarka xirfadahooda xiriirka dadkii ay ka soo jeedeen Foto: Sofia Müller/Scanpix
Stor nytta med utländsk bakgrund i affärslivet
Horumarka Gancsiga iyo doorka ajinabiga
La daabacay måndag 13 februari 2012 kl 11.33
Dadyoowga asal haan ka soo jeeda dalkan Iswiidhan dibadiisa ayaa ku manaafacaaday labda dhul ee ay xiriirka la'eeyahiin. Kuwaas oo kaga faa'iidaystay sidii ay u horumarin lahaa ganacsigooda iyo waliba ka gungaarka xirfadahooda. Dayoowgaas soogalootigaa ayaa rajo ween ka muujiyay soo dejinta iyo ka dhoofinta alaabooyin ka labada dhal.
Arrinkaas ayee shaacisay shurkada nyföratagarecenterum oo sheegtay in ka badan bar dadyoowga xiibinta ka ha ineey yahiin dadyoow ku dhashay dadkan dibadiisa.Ku waasoo intooda badan ka dhex shaqeeya dalkoodii hooyo iyo kan aha dalkooda labaad.
Gancsiga soo dejinta iyo dhoofinta ayaa ku soo beegmahaya xili ay jirto shaqo laan badan oo dadka soo galootigaa haysata dalkan Iswiidhan. Dalalka ugu badan ee dadyoowgaasi ay wax ka soo galiyaan waxaa ka mida Talyaniga, bariga dhexe iyo dalaka Balkan.